Cheap Chain Plate Organic Waste Composting Turner Machine na Hydraulic Control System Ndị na-eweta ya na orylọ Ọrụ | YiZheng
Gịnị bụ Chain efere Composting Turner Machine?
Na Chain efere Composting Turner Machine nwere ezi uche imewe, obere ike oriri nke moto, ezigbo ike ihu gia reducer maka nnyefe, obere mkpọtụ na elu arụmọrụ. Akụkụ dị ka: Chain na-eji ogo dị elu ma na-adịgide adịgide. A na-eji usoro hydraulic eme ihe maka iweli na iweda ala, na omimi ntụgharị nwere ike iru 1.8-3 mita. Ihe dị elu na-ebuli elu nwere ike iru mita abụọ, nọrọ na ikuku ruo ogologo oge, na-enweghị ntụgharị, ụdị ndị ọzọ nke mpempe akwụkwọ nwere ike ime tankị gbaa ụka atọ, na-ejiChain efere Composting Turner Machine, otu ezuola.
Gịnị bụ Chain efere Composting Turner Machine eji？
1. Iji yinye mbanye, inyeaka nkwado nke pallet Ọdịdị, tụgharịa iguzogide ịzọpụta ume, adabara miri uzo ọrụ.
2. Ntughari mpempe akwụkwọ nwere mgbatị na usoro mgbanwe na-agbanwe agbanwe iji kpuchido usoro draịva na akụkụ ọrụ yana ịrụ ọrụ nke ọma.
3. tụgharịa-atụba pallet onwem na nke mbughari eyi na-eguzogide curved nha nha agụba, ndinuak ikike, ihe onwunwe chernobyl oxygen mmetụta.
4. Akụrụngwa na-anọ na pallet ruo ogologo oge, gbasasịa elu, na ikuku na kọntaktị na mmiri ozuzo zuru oke, dị mfe.
5. Kwụ na vetikal Nwepu nwere ike nweta n'ebe ọ bụla na oghere tụgharịa ọrụ, mgbanwe agagharị.
6. Akụkụ na-ebuli elu na-eji usoro njikwa hydraulic, ọrụ na-agbanwe agbanwe, nchekwa na arụmọrụ.
7. Njikwa ụgbọelu dị ogologo oge na-aga n'ihu, ntụgharị ihu, ntụgharị na ngwa ngwa na arụmọrụ ndị ọzọ iji melite gburugburu ebe ọrụ.
8. feeder oghere ihe, akpaka orùrù ngwaọrụ, anyanwụ gbaa ụka ụlọ na ventilashion aeration usoro.
9. Na-agwakọta ọrụ nke ịtụgharị ihe, na-achịkwa porosity, na-eweta oxygen, yana transposition ihe.
10. Akpaaka njikwa usoro na nchekwa mgba ọkụ na ime akara.
11. Ejiri ngwa ngbanwe oghere nwere ike ịchọpụta igwe oghere na-arụ ọtụtụ oghere, na-echekwa ego.
Chain efere Composting Turner Machine Working Principle
Sistemụ na-agba ọsọ nke Chain efere Composting Turner Machine nakweere agbanwe ugboro ọsọ iwu, nke nwere ezi ime mgbanwe iji dị iche iche ihe, ike na-agba ọsọ, elu mbịne arụmọrụ na miri uzo ọrụ. Ọ nwere ike belata oge gbaa ụka ma melite arụmọrụ na arụmọrụ ngwaahịa. Iji usoro ọsọ ọsọ na-agbanwe agbanwe, nwere ike ịmegharị mgbanwe na ibu ọrụ.
Chain efere Composting Turner Machine Model Nhọrọ
Chain efere obosara
Adịghị ibu Speed
Obosara nke gbaa ụka tank
Elu nke gbaa ụka tank
Ihe dị elu
Ike ntụgharị kachasị
Ngwongwo ihe nke uzo obula
Oke n'ibuli elu
Nke gara aga: Groove Comdị Composting Turner
Osote: Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Isi